Shirka Wadatashiga Maamulka K/Galbeed Oo Maanta ka furmey Magaalada Beydhabo:-(Sawiro) – Hareerley News
Waxaa maanta ka dhacay Magaalada Beydhabo shirka wada tashiga Ee wasaarada Arimah gudaha iyo dib u hashinsinta K/Galbeed Soomaliya kaas Oo ay ka qeybgaleen dhamaan Maamulada K/Galbeed Baay,Bakool iyo shabeelaha hoose.
Shirkaan maanta ka furmey Beydhabo ayaa waxaa soo qabanqaabisey wasarda arimaha gudah iyo dib u hishiinta K/Galbeed kaas Oo loogu hadalayay Arimo dhowar ah Iyadoo wasarda Arimaha Gudaha iyo Dib u hishiisiinta ka Xog dhageysatay masuuliyinta gobalda iyo Degmooyinka ee Maamulka k/Galbeed.
Shirka ayaa socon dona ilaa mudo sedax Cisho ah Intuu socdo shirkaan ayaa loogu hadali doonaa Arimo dhowr ah Oo ay ka mid yihiin Sidii Maamulada haatan jira ay ugu shaqeyn lahaayeen dhisida Golayaasha Degaanada kuwaas Oo soo xuli doona Galaha Baarlamaanka Maamulka K/Galbeed.
Mida Xigtana waa siddii loo heli lahaa tirokoobka dadweynaha Maamulka K/Galbeed iyadoo tirokoobkaasina lugu jaangooynayo Marwaliba Oo ladoonaya in ay ka hanaqaado hanaanka doorasho qof iyo Cod ah iyadoona Maamulada qaar dhulalkooda wali ay faraha ku hayaan Ururada Argagixisada Ee Al Shabaab.
Shirkaan Noocaan ah ayaa ah kii ugu horeysey Ee ay Wasaarada Arimaha Gudaha iyo dib u hishiisiinta Maamulka K/Galbeed uu sidaan Oo kale isagu Xirmo iyadoo ayse wali Degaano badan Al Shabaabku Gacanta Ugu jiraan.
Ciidamada Suuriya oo galay magaalo Muhiim ah
Posted on October 15, 2019 October 15, 2019 Author Hareerley News
Ciidamada Suuriya ayaa si dhaqso ah ugu dhaqaaqay magaalooyinka iyo Tuulooyinka ku yaala waqooyi bari ee dalka Suuriya iyaga oo isku diyaarinaya dagaal ay kaga hortagayaan Ciidamada uu Turkigu hogaaminayo Warbaahinta Dowladda ayaa sheegaysa in Ciidamada Suuriya oo Ruushku tagaeero ay gudaha u galeen magaalada Manbij,waxaana talaabadaani ay qayb ka tahay heshiiskii ay la galeen […]
Gudoomiyaha Maxkamada Ciidanka XDS Oo Digniin u Direy Taliyayaasha Ciidanaka
Gudoomiyaha Maxkamadda darajadda 1aad ee Ciidamadda Col Xasan Cali Nuur ayaa sheegay in Hadda wixii ka Dambeeya loo maxkamadayn doono Askartii hubkooda Cadow Ka Qaato. Waxaa uu sheegay in Askari walba lagula xisaabtami doona hubka loo dhiibay, islamarkaana hadii Al-Shabaab ay soo weeraraan oo ay qaataan hubka in asaga laga rabo. Shuute ayaa Taliyeyaasha Ciidanka […]
Loolanka Qatar iyo Sucuudiga ee Soomaaliya iyo aqoonsiga baasaboorka Somaliland…..
Warar soo baxaya ayaa sheegaya in dawladda Sucuudiga ay toos ah u aqbashay baasaboorka Somaliland, kaas oo aan laga aqoonsanayn ama aan loogu safri karin dalalka caalamka. Warbaahinta caalamka ayaa siyaabo kala duwan wax ug qortay arrinta Soomaaliya iyo dalalka loolanka ugu jira ,kuwaas oo ay ka mid yihiin Qatar iyo Sucuudiga. Wargeyska Daily Sabah […]